Ukuhamba usuka eParis uya e-Amsterdam ngesitimela ku 3 amahora | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Ukuhamba usuka eParis uya e-Amsterdam ngesitimela ku 3 amahora
Kuyiqiniso ukuthi kukhona ezingaphezu kweyodwa ukufinyelela Amsterdam kusukela Paris. Kwathi bonke ihambisane pro zabo kanye nebubi, nohambo kusukela Paris Amsterdam ngesitimela uhlala ukhetho best lapho wenza iziqhathaniso. Sikunikeza zonke izizathu ezenza travel isitimela kufanele kube okukhethayo kuqala, ikakhulukazi uma ufuna ukufika Amsterdam kusukela Paris ngokuphepha futhi ngesitayela nenduduzo.
Paris Amsterdam ngo zemininingwane vs. Okunye Zindlela Izikhangibavakashi
Ukuhamba ngemoto usuka eParis uye e-Amsterdam ngokungangabazeki a olunothile idrayivu. Nokho, kunengqondo ukuthi ungakwazi yini ukusikhokhela isikhathi futhi uqiniseka ngokwanele ukuba kumigwaqo eliphakathi kwale mizi emibili.
Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela ozithatha yakho uhambo ngemoto kusukela Paris Amsterdam, kukhona motorways, Indawo yokukhokha, futhi petrol ukucabanga mayelana. Ukuhamba kungathatha kufika 6 amahora, kakhulu; ngakho udinga ukuhlela kho okusele izitobhi. Futhi, cabanga yimuphi isevisi nophethiloli adingekayo endleleni, kanye kwekhefu lasemini. Zonke lezo zindleko ungakwazi futhi siyonezela up.
Ungase ucabangele ukuthatha ibhasi ngoba uke wezwa kungcono indlela eshibhe ukuhamba Amsterdam kusukela Paris. Nakuba lokhu kuyiqiniso, uhambo kuzothatha cishe 7 amahora. Yilokho isikhathi eside ukuba endleleni. It uyozizwa ngisho isikhathi eside ngoba uwena ikhuza a ibhasi nge isikhala limited ukuhamba.
Kukhona futhi ukhetho undiza kusukela Paris Amsterdam. Kodwa ngenkathi indiza kungathatha ihora 15 amaminithi, ayinikezeli izilinganiso ezifanayo njengokuhamba ngomhlaba. Ngaphandle uku First Class, uzithole baminyana e ungakhululekile indiza izihlalo.
Kukhona futhi akukho amahle kwenkundla European ukujabulela uma uhamba ngendiza. Uzoba ikakhulukazi abe amafu ngaphandle ukubheka uma kwenzeke ukuba ngihlale phansi esihlalweni iwindi; kungenjalo, ungathembela ku-e-indiza ibhayisikobho ukukugcina Entertained. Futhi ungakhohlwa ukuthi ngesikhathi ehamba ngendiza kuyinto kwakuthiwa indlela esheshayo yokuthola Amsterdam kusukela Paris, usadinga nephuzu esikhathini nemali kuzothatha ukuya esikhumulweni sezindiza.
I-Comfort and Kalula yeParis iye e-Amsterdam ngesitimela
Uma kukhulunywa ngokuhamba usuka eParis uye e-Amsterdam, ukuhamba ngezitimela ngezitimela zikaThalys kunikeza okuhle kakhulu emhlabeni wonke. Kuyinto kunjalo, indlela ukhululekile kakhulu futhi elula ukuhamba sibonga ukuqeqesha ngesivinini. Ungahamba uzungeze isitimela kalula ngaphandle kokubona ukuthi siyashukuma.
Uzozizwa uphephe futhi ngokuhamba ngesitimela, nazi ukuthi nina Awuwabelani imigwaqo kanye nemigwaqo abashayeli budedengu. Futhi ngesivinini 300 km ngehora, ufinyelela yakho uya khona ngesigamu isikhathi kwakuzothatha ngemoto noma ibhasi. izitimela ngesivinini ungathola ukuthi Amsterdam kusukela Paris e 3 amahora 19 amaminithi. Futhi ngokungafani nokuhamba ngendiza, uzoba emaphandleni umbukwane European ukujabulela.
Ukubhuka amathikithi akho isitimela kusengaphambili, futhi ungakwazi ukujabulela amazinga eshibhe, ukwenza ehamba ukuqeqesha ukukhetha ukonga ngaphezulu uma uhlela.
Ngokuhamba nge Thalys izitimela, ungakwazi ukuthenga amathikithi kuze kube 90 izinsuku ngaphambi kosuku travel yakho bese ugcine 75% ku athenge amathikithi esitimela ngemali uma ukubambela izihlalo zakho ekuqaleni.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys amathiphu trainjourney Tranride izitimela ithiphu yesitimela amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha uhambo ngesitimela Izikhangibavakashi travelamsterdam traveltips